EPON OLT Vagadziri & Vatengesi | China EPON OLT Fekitori
ZJ5610-EL Nhepfenyuro EPON OLT
ZJ5610-EL yakakwira-kubatanidza uye yepakati-inokwana kaseti EPON OLT yakagadzirirwa vashandisi 'kuwana uye bhizinesi kembasi network. Inoteedzera IEEE802.3 ah hunyanzvi zviyero uye inosangana neEPON OLT michina zvinodiwa zveYD / T 1945-2006 zvehunyanzvi zvinodiwa kuti uwane network -— zvichibva paEthernet Passive Optical Network (EPON) uye China telecom EPON technical technical 3.0. ZJ5610-EL akateedzana ane yakanakisa kuvhurika, hombe chinzvimbo, kukwirira kuvimbika, yakazara software basa, e ...
Nhanganyaya 1. Anotakura-giredhi yakakwira-density rack-mhando PON OLT michina 2. Yunifomu chikuva che1G-EPON, 10G-EPON uye GPON 3. 10 PON slots, 160 1G-EPON kana 80 10G-EPON zviteshi kana 160 GPON zviteshi 4 PON Optical link yekudzivirira, main control board redundancy kuchengetedza, masimba emagetsi redundancy dziviriro. Hunhu 1. Standard: EPON inosangana IEEE802.3-2008 Standard, GPON kusangana ITU-T G.984 Standard. 2. Kukura kukuru: 160 1G-EPON zviteshi kana 80 10G-EPON zviteshi kana 160 GPON zviteshi. 3. Multi-zviteshi: GE Comb ...
Kunze EPON OLT ZC6000
Nhanganyaya 1. Mutakuri-giredhi rekunze EPON OLT michina 2. Inesarudzo 1550nm EDFA pluggable module 3. 8 PON zviteshi 4. Industrial giredhi dhizaini, yakazara yakavharirwa kufa yakakandwa Al goko 5. Yakawanda simba magetsi module Unhu 1. Yakajairwa: inoenderana neIEEE802.3- 2008 Yakajairwa. 2. Service interface: network side: 2 GE magetsi emachiteshi uye 2 10GE optical ports, mushandisi divi: 8 GEPON zviteshi. 3. EDFA basa: inopa pluggable CATV EDFA mamodule uye iyo inobuda magetsi emagetsi inogona kugadzirwa. 4. High relia ...
Anotakura-giredhi bhokisi-mhando EPON OLT ZC1600
Nhanganyaya 1. Mutakuri-giredhi bhokisi-mhando EPON OLT michina 2. Inokodzera diki-diki yekuwana, inoshanduka yekumisikidza 3. 16 PON zviteshi 4. PON Optical link dziviriro, redundant simba module Hunhu 1. Yakajairwa: inoenderana neIEEE802.3- 2008 Yakajairwa. 2. Kugona: 16 PON zviteshi. 3. Multi-ports: ipa GE zviteshi (zvemagetsi uye zvemagetsi) uye 10GE opareta emachira parutivi rwe network. 4.Kuvimbika kukuru: masimba emagetsi redundancy dziviriro, fan module redundancy, PON optical link protein ...